सरकारी कार्यालय जान नपरे हुन्थ्यो नि !
तपाईंलाई के लाग्छ कुन्नी ? मलाई चाहिँ सरकारी कार्यालयमा जान नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । लम्बेतान प्रक्रियाको जालोमा पर्न नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । लागेर के गर्नु ? पेसा र काम विषेशले सरकारी कार्यालय धाइरहनुपर्छ । ठोकिरहनुपर्छ सरकारी कर्मचारीसँग ।
हालसालै समाचार प्रयोजनका लागि सूचना आवश्यक पर्यो । हरिहर भवनस्थित समाज कल्याण परिषद् पुगें । सूचना अधिकारी भेटें । आवश्यक सूचना मागें ।
सूचना अधिकारीले भने, ‘तपाईंले मागेको सूचना भृकुटीमण्डपको कार्यालयमा पाइन्छ । त्यहाँ जानुहोस् ।’ उनले भेट्नुपर्ने मान्छेको नाम पनि भने ।
भृकुटीमण्डपमा भेट्नुपर्ने मान्छेको नाम कण्ठस्थ गर्दै हरिहर भवनबाट निस्कें । भृकुटिमण्डप कार्यालयमा पुगें । भेट्नुपर्ने मान्छे भेटिएनन् । जवाफमा सुनियो, ‘बाहिर जानु भएको छ ।’
आफू आउनुको कारण बताएँ । भएका कर्मचारीपिच्छे फरक–फरक बोली सुनियो ।
‘हामीले दिन मिल्दैन ।’
‘हाकिम सा’ब आएपछि मात्रै हुन्छ ।’
‘यस्तो सूचना त दिन मिल्दैन ।’
‘निवेदन लेख्नुहोस् ।’ कसैले सुझायो ।
सुझाव मान्दै निवेदन लेखियो । चाहिएको सूचना र सूचना आवश्यक परेको कारणसहित ।
निवेदन लेखिसकेपछि एक कर्मचारीले भने, ‘छाप खोई ? संस्थाको लेटरप्याडमा लेख्नुपर्छ ।’
ए बा ! यो निर्देशनसहितको प्रश्न सुनेपछि भाउन्न छुट्यो । अनि भने, ‘तपाईं झोलामा लेटरप्याड र छाप बोकी हिँड्नुहुन्छ ?’
लोकसेवा उतीर्ण सरकारी अभिमान झन् बढ्यो । भन्यो, ‘तपाईले मागेको सूचना दिन ५ सय रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ ।’
अर्को कर्मचारीले थपे, ‘यस्तो कागजमा लेखेर हुँदैन, छाडेर जानुहोस्, हाकिमसा’बले माने भने हुन्छ नत्र हुँदैन ।’
हाकिम सा’बले मान्ने/नमान्ने भन्दा पनि म ५ सय रुपैयाँको कुरा सुनेरै गलिसकेको थिएँ । जिज्ञासा राखें, ‘५ सय ! के को सर ?’
‘हाम्रोमा जुनसुकै सूचना दिएको ५ सय दस्तुर लाग्छ ।’
सयौं शासकका जन्ममिति, मृत्युतिथिका वस्तुगत प्रश्न रटेर लोकसेवाको लडाईं जितेर आएका कर्मचारीसामु हार मानेँ । ‘जो आज्ञा ।’ भन्दै कार्यालयबाट बाहिरिएँ । लाग्यो, ‘कल्याण गर्न बसेको संस्थाले त सूचना बेचेरै मनग्गे कमाउँदो रहेछ !’
लखतरान हुँदै कार्यालय पुगे । कर्मचारीले भने बमोजिम लेटर प्याडमा निवेदन लेखें । कार्यालयको छाप लगाएँ ।
पछिल्लो दिन सहकर्मी कृष्ण लोथ्यालले फोन गरेर भने, ‘हरिहर भवनबाटै तोक लगाएर ल्याउनु पर्छ रे !’
हरिहर भवन गएँ । परिषद्को कार्यालय पुग्दा १० बजेर २० मिनेट गएको थियो । कार्यकक्षमा सूचना अधिकारी थिएनन् । पर्खिएँ । पौने ११ भयो । फोन गरेँ । भने, ‘म त अफिसतिरै छु ।’ फोन काटियो ।
कोठा चाहार्न थालें । भेटिएनन् । ११ बजिसक्यो । फेरि फोन गरे । उठेन । म्यासेज पठाएँ । एकछिनपछि आइपुगे सूचना अधिकारी । भने, ‘पल्लो बिल्डिङमा जानुहोस् । त्यहाँ तोक लगाउनुहोस् । अनि यहाँ आउनुहोस् ।’
आज्ञा मान्नै पर्यो । तोक लगाउने ठाउँमा पुगें । तोक लगाउने कर्मचारी गफमा व्यस्त थिए । मेरो प्रवेशले उनलाई बिथोल्यो सायद । अनुहार बिगार्दै हेरे । मैले हातमा रहेको चिठी सोझ्याए उनीतर्फ । चिठि समाते । ध्यान पूर्वक पढे । ओल्टाई पल्टाई गरे ।
बडो दुःख, कष्ट भएजसरी डटपेन खोज्न थाले । सिग्नेचर गरे । फेरि चिठी हेरे । फेरि ओल्टाई पल्टाई गरे । मेरो अनुहार हेरे । अनि चिठी थमाए । चिठी लिएर अर्को कोठामा जान निर्देशन दिए ।
अर्को कोठाका कर्मचारीले चिठीको फोटोकपी गर्न आफ्नै कर्मचारी खटाए । फोटोकपी गर्न गएका कर्मचारीलाई फोन गरेरै बोलाउनु पर्यो । त्यसपछि औपचारिकता पूरा गर्दै उनले फेरि तोक लगाउने कोठामा जान भने ।
अनि भने, ‘१० मिनेटको कामका लागि यहाँ आउनुभएछ । त्यहाँ(भृकुटीमण्डप)मा यसो कुनै पिएनलाई चिया खर्च दिएर फाइल हेर्न लगाएको भए त भइहाल्थ्यो नि !’
सरकारी कर्मचारी नै घुस दिने आईडिया दिन्छन् । अचम्म लाग्यो ।
तोकादेश कोठामा फेरि सिग्नेचार, ओल्टाई पल्टाई प्रक्रिया पूरा गरेपछि अर्को भवनको ३ तलामा रहेको सूचना अधिकारीको कोठामा पुगें । सूचना अधिकारीले एकछिन पर्खन निर्देशन दिए ।
कम्पूयुटर खोले । कछुवा गतिमा केही टाइप गर्न थाले । १० मिनेटको कडा परिश्रमपछि उनले टाइपिङ सके । प्रिन्ट गरे । मेरो हातमा भएको चिठी मागे । र, आफूले भर्खरै प्रिन्ट गरेको चिठको एकप्रति टाँसे ।
१० मिनेट लगाएर के टाईप गरेछन् भनेर हेरेको त, ‘माग गरिएको सूचना प्रतिपाना ५ रुपैयाँका दरले दिनुू ।’
सेवाग्राहीलाई एक कोठाबाट अर्को कोठा, एक हाकिमको पञ्जाबाट अर्को हाकिमको पञ्जामा पारिएन भने त सरकारी प्रक्रिया नै पूरा हुँदैन । मानौं, सास्ती दिनु नै सरकारी प्रक्रिया हो ।
भृकुटिमण्डप पुगेँ । तोकादेशसहितको चिठी देखाएँ । ‘हाकिमसा’ब बाहिर जानुभा’छ । आधा घण्टामा आउनुहुन्छ । चिठी यहीं राखेर डुलेर आउनुहोस ।’ कर्मचारीले सुझाए ।
‘हवस हजुर !’
आधा घण्टापछि हाकिमसाब आए । तर, र्याकको साँचो बोकेका कर्मचारी बेपत्ता । तल्लो तला, माथिल्लो तला दौडेर चिठी राखेको दराजको साँचो बोक्ने कर्मचारी खोजे ।
तल्लो तलामा गए । आवश्यक सूचनाका फाइल फेला पर्यो । चाहिने पेज संख्या पनि भने । पेज संख्यासँगै हिसाब सुरु भयो ।
हिसाब सुरु हुँदै गर्दा चीलका जस्ता आँखा पार्दै एक कर्मचारीले परैबाट भने ‘चिठी त दर्ता नै भएको छैन ।’
‘ए हो त नि ! लौ दर्ता गराएर ल्याउनुहोस् !’ अर्को कर्मचारीले आदेश दिए ।
दौडेर माथिल्लो तला गए । हाकिम साहेबलाई दर्ता प्रसंग सुनाए । ‘एउटा चिठी उता (हरिहर भवन) दर्ता भइसकेको छ । अर्को(सूचना अधिकारीले लेखेको) चिठी आन्तरिक हो । यो दर्ता गर्नुपर्दैन ।’
हाकिमसा’बको वचनले ढुक्क भएपछि तल्लो तलामा आए ।
हाकिम साहेबले भनेका सबै कुरा दुरुस्तै सुनाए । कर्मचारी मौन बसे ।
मलाई चाहिएको थियो २५ पेज । हरिहर भवनबाट आएको आदेश अनुसार १ पेजको ५ रुपैयाँका दरले २५ पेजेको १ सय २५ रुपैयाँ हुनेभयो ।
तर, उता कुनाको कुर्सीमा आसिन कर्मचारीले आपत्ति जनाए । ‘कसरी १ सय २५ हुन्छ, ५०० हो ।’
‘हो त हामीले जसलाई जे सूचना दिएपनि ५ सय लिन्छौं ।’ अर्को कर्मचारीको स्वर सुनियो ।
‘सर, मैले पाएको चिठीअनुसार त १२५ रुपैयाँ हुन्छ । म त तिर्दिनँ ५०० ।’ मैले अड्डी कसें ।
‘हाम्रो निर्देशिकाअनुसार ५०० लिनुपर्छ । तपाईंले भनेर हुन्छ ?’
‘सर, मैले भनेको होइन । तपार्इंको केन्द्रीय कार्यालयले दिएको पत्रअनुसार भनेको ।’
‘यो पत्र लेख्ने मान्छे नयाँ हुन्, उहाँलाई थाहा भएनछ । लौ, फौन गरौँ त ।’
हरिहर भवनमा विराजमान सूचना अधिकारीलाई फोन लगाइयो । निर्देशिका सम्झाइयो । त्यसपछि मलाई कुरा गर्न लगाइयो, ‘कुरा त बाझिएछ । हाम्रो निर्देशिकाअनुसार त ५०० तिर्नुपर्ने रहेछ ।’
‘सर, मैले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार सूचना मागेको हुँ । अब यो ऐन भन्दा माथि तपाईंको निर्देशिका हुन्छ र भन्याँ ?’ मेरो प्रश्न सुनेपछि उनले आलटाल गर्दै फोन राखे ।
‘तपाईले मागेको सूचना नै होइन । तपाईले त कुनै संस्थाको कागजात अर्थात् सम्पत्ति माग्नु भएको हो ।’ यी कर्मचारीले त मलाई सूचना नै नदिने लक्षण देखाए ।
‘त्यो ऐन सूचना आयोगका लागि हो, हामी अर्को संस्थाको ऐन किन मान्ने ?’ अब सबै कर्मचारी ममाथि खनिन थाले ।
आक्रोशले सीमा नाघ्यो, ‘मैले तपाईको निर्देशिकाअनुसार सूचना मागेको होइन, मैले सूचानको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार सूचना मागेको हो । ल, तपाईको निर्देशिका ऐन भन्दा माथि छ भनेर प्रमाणित गरेर देखाउनुहोस्, म ५०० तिर्छु ।’
एउटा कर्मचारी दौडिँदै हाकिम साहेबको कोठामा गए । केही बेरमा फर्किए, ‘हाम्रो निर्देशिका र ऐन बाझिएछ ।’
‘ए बाबा ! अब म यो सूचना लिन तपाईको निर्देशिका सच्याउने समयसम्म पर्खिनु ! सताउनुको पनि हद हुन्छ नि !’
अब भने सूचना पाइने भयो । तर, सरकारी कागज कहाँ सजिलै हात लाग्छ र ?
एक जना कर्मचारीले दुई पेज फोटोकपी गर्थे । अनि कता जान्थे कुन्नी ? त्यसपछि अर्को कर्मचारी आउँथे । त्यसपछि अर्को । यसरी २५ पेज फोटोकपी गर्न ३ जना कर्मचारीले परिश्रम गर्नुपर्यो ।
१२५ रुपैयाँको रसिद काट्न २ जनाले परिश्रम गर्नुपर्यो । एउटाले फाईलमा नाम लेखे । रुपैयाँ लेखे । अर्कोले रसिदमा ।
असरल्ल, छरपष्ट, उल्टो सुल्टो पेज मिलाएर माग गरेको सूचना थमाए । र, भन्छन्, ‘तपाईले त सजिलै पाउनुभयो ।’
सजिलो भनेको यस्तो हो भने अप्ठेरो भनेको कस्तो होला ?
कानून र प्रक्रियाका नाममा सरकारी कार्यालयले सेवाग्राही सताउँछन् । छरितो, चुस्त र दुरुस्त सेवा प्रबाहका लागि बनाइएका कानून तथा प्रक्रियाले सेवाग्राहीलाई सकस दिन्छन् । लाग्छ, सरकारी कर्मचारी सेवा गर्न बसेका होइनन्, कानून र प्रक्रियाका जालोमा सेवाग्रहीलाई फसाउन बसेका हुन् ।
सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई कर्मचारीले कहिल्यै ‘बस्नुहोस्’ भन्दैनन् । उनीहरुको टेबल अगाडि उभ्याउँछन् । वल्लो कोठा, पल्लो कोठा, तल्लो तला, माथिल्लो तला दौडाएर एक गिलास पानी सोध्दैनन् । बरु उल्टै भन्छन्, ‘आज हुँदैन भोलि आउनू’ अझ थर्काउँदै भन्छन्, ‘तपाईले भनेर हुन्छ ?’
१० मिनेटमा हुने काम गर्न दुई दिन बिताइदिन सक्छन् सरकारी कर्मचारीले । किनभने उनीहरुलाई कतै पुग्नु छैन् । कुनै हतारो छैन । तर, सेवाग्राहीलाई त हतारो हुन्छ नि !
सरकारी सेवा मात्रै होइन, निजी क्षेत्रको स्थिति पनि उस्तै छ ।
केही समयअघि शान्तिनगर गेट छेउको नेपाल कोरिया मेडिकल डोङसानमा उपचारका लागि गएको थिएँ । पिसाब र रगतको रिर्पोट लिएर डाक्टरलाई देखाउनुपर्ने थियो ।
रिर्पोट दिने ठाउँमा युवती थिइन् । फोन कानमा च्यापेर बसिरहेकी । आफ्नो नाम भनेँ । कानबाट फोन नहटाइकनै उनले एक हातले रिर्पोट दिइन् ।
रिर्पोट बोकेर डाक्टर पर्खिएँ । डाक्टरलाई पर्खिरहँदा रिपोर्ट पढ्ने चेष्टा गरे ।
रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा माइनस हुन बाँकी रहेछ । पिसाबमा हुनुपर्ने भन्दा नहुनुपर्ने तत्व धेरै छन् । रगतमा सुगरबाहेक अरु केही देख्दिनँ । चिन्ता र डरले निधारमा खलखली पसिना आउन थाल्यो । भयावह रिर्पोट देखेर आँखा तिरमिराए, हात काँप्न थाल्यो ।
यस्तो रिर्पोट देखेपछि डाक्टरले १ दर्जन औषधि खाउ भन्छन् । तर, औषधि किन्न पुग्ने पैसा भने थिएन ।
एकातिर नाजुक देखिएको रिर्पोट । अर्कोतिर कमजोर खल्ती । दोहोरो पिरले च्यापेपछि शौचालए गए । मुख धोए, तर अनुहारको पीर र त्रास भने पखालिएन ।
अनि फेरि हिम्मत गरेर मिहिन तरिकाले रिर्पोट पढ्न थालेँ । रिपोर्टमा मेरो नाम रहेनछ । अर्कैको नामको रिर्पोट मलाई थमाएकी रहिछन् युवतीले ।
अनि दौडिदै रिर्पोट दिने युवतीको कक्षमा पुगें । ‘यो मेरो रिपोर्ट होइन । मेरो नाम सागर चन्द हो’ भनें ।
युवतीको कानबाट फोन तल झरेको थिएन । एक हातले रिर्पोट समाउँदै काँधले फोन च्याप्दै युवतीले मेरो नाम प्रिन्ट भएको रिर्पोट खोजिन् र थमाइन् । उनको यो हर्कत देखेपछि मैले भने, ‘यस्तो मजाक गर्ने तपाई !’
त्यो भयानक रिर्पोट घर्रामा थान्को लगाइन् । फोनमा भन्दै थिइन्, ‘ए प्यार भि ना !’
तपाई कल्पना गर्नुस्, म पढ्न नसक्ने थिएँ र त्यहीं रिर्पोट लिएर डाक्टरकोमा गएको भए...
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन १८, २०७६, ०९:५४:००